Franchise Directory - International & Master Franchise | Franchiseek
Pamusoro Global Franchise Directory
Kweanopfuura Makore makumi maviri
Franchiseek inzvimbo yepasi rese yefrancise directory inosanganisira, master franchise mikana, yedunhu & nedzimwe nyika franchise kuUK, USA, Europe, Asia & Global
Tsvaga pazasi pemanje ichangoburwa francise mikana yekutengesa mune yepasi rese franchise dhairekitori
Franchiseek yakagadzwa muna1999 uye kubvira ipapo, yakabatsira zviuru zvevanotarisira maFrancisee kuwana yavo yakakodzera franchise yepasi rose. Franchiseek Franchise dhairekitori inonyora mazana emikana yekutengeswa munyika makumi matanhatu pasi rese kusanganisira mikana yepasirose franchise mikana mune yedu tenzi Franchise dhairekitori.
Zvakare kunyora mazana emadzishe, emuno, mudunhu & epasi rose anotengeswa, broker kuburikidza neazvino franchising nhau pasi rose. Bhurawuza kuburikidza nemazana emahara evanotengeswa mune yako yemu Franchise dhairekitori kuti uwane yako yakakodzera franchise.
Mukana weFrancise NaImaindasitiri
Bhizinesi Advisory Franchises
Mutengo wakaderera Franchise
Chii chinonzi Franchising?
Franchising inopa nzira yekuve neyako uye nekuita bhizinesi rako pachako, asi kwete newe. A franchise chibvumirano pakati pemapato maviri; the franchisor and franchisee.
The franchisor inopa mucherechedzo wekutengeserana kana zita rekutengesa remhando yebhizinesi rakasikwa pamwe chete nezvakanyorwa zvebhizinesi, uye a franchisee mumwe munhu anobhadhara mari yekutanga, dzimwe nguva pamwe chete nemari inoenderera, iyo inovapa rezenisi rekutengesa pasi peaya mavara ekutengesa kana mazita ekutengesa uye kuita bhizinesi rakamiswa.
Bhizinesi fomati franchising ndiyo mhando inonyanya kuzivikanwa kune munhu wepakati. Mune bhizinesi format franchise hukama, iyo franchisor inopa kune Franchisee kwete chete yayo yekutengesa zita, zvigadzirwa uye masevhisi asi hurongwa hwese hwekushandisa bhizinesi. Iyo franchisee inowanzo gashira kusarudzwa kweiyo saiti uye kutsigirwa kwekuvandudza, zvinyorwa zvinyorwa zvinoshanda, kudzidziswa, zviyero zvemhando, kutonga kwemhando, chirongwa chekushambadzira uye rubatsiro rwebhizinesi rekubatsira kubva kune iyo franchisor.
Kune rakakura renji Franchise rinotengeswa pane Franchiseek franchise dhairekitori, kubva pakudya chengetedzo, mota dzekudzivirira uye kuchenesa mafuratiji kuenda kune mhuka dzakabatana franchise uye plumbing. Iwe une chokwadi chekuwana yako yakakodzera Franchise kuFranciseek yepasi rese Franchise dhairekitori.
Nei Tenga Franchise?
Zvisingori nyore, kana uchitenga franchise, iwe uri kutenga iyo yakaratidza bhizinesi modhi. Kusiyana nekutanga rako bhizinesi kubva kutanga, franchisor yakatogadzira iyo bhizinesi rekutengesa uye zita rechiratidzo, nezvikanganiso zvese zvakapfuura zvakaziviswa uye zvakagadziriswa.
Iyo franchisor ichave yakadzokorora iyo franchise bhizinesi kuyambuka matunhu akawanda atova nemamwe maFranciseese ese achitevera mukubudirira kwetsoka dzeFrancisor.
Ichi chikonzero nei franchise kazhinji iine nani chiyero chekubudirira kana ichienzaniswa nebhizinesi rekutanga. Muchokwadi, vazhinji vatungamiriri vanotungamira uye masangano eFlorise vanoti franchise yekutanga-up budiriro mitengo inopfuura 95%, yakakura kwazvo kupfuura kana iwe ukamisa bhizinesi uri wega.
Kana uchitenga franchise, iwe unowanzo gamuchira zvese zvaunoda kuti utange zvakanaka. Mushure mezvose, kubudirira kwako ndiko kubudirira kweiyo franchisor. Iyo franchisor ichada kuti iwe uite nekuti iwe uri kutengesa pasi pezita ravo rezita uye ivo vanoda kuti iwe uvake mukurumbira unobudirira uyo unozova nemugadziro wakanaka pavari, uye nevamwe vavo vazhinji vakawanda maFrench.
Tanga nhasi uye uwane yako yakakodzera franchise neFranciseek International.
Shamba Franchise Yako
Dzvanya "Wedzera Franchise" pane iyo huru menyu, sarudza pachesi uye saina.
Shandisa Account yako
Zadza iyo minda pane Yekuwedzera Rondedzero peji. Sarudza ako mapoka uye nyika.
Runyorwa rwako ruchatenderwa nechikwata chedu mukati mezuva 1 rekushanda. Kana zvichidikanwa, tinogona kugadzirisa runyorwa rwako.
zvepasi rose Franchise Nhau
30 / 06 / 2020Maitiro ekuwedzera bhizinesi epasi rese pamwe natenzi franchising
24 / 06 / 2020Zvakanakira kuva tenzi franchisee
22 / 06 / 2020UK yekutanga Virtual Franchise Show inozivisa 2nd chiitiko cha2020
22 / 06 / 2020Franchise inoramba ichitsigira vadzidzi mari
19 / 06 / 20203 matipi ekudyara mari mu franchise mikana mune yepashure-COVID-19 nyika
18 / 06 / 2020"Aspray Franchise Akandibatsira Kubudirira Bhizinesi kuti Ndizvikudze"
18 / 06 / 2020Imba Panzvimbo yakanyanya kukurudzirwa yekuchengeta imba kambani
17 / 06 / 2020Swimtime kuvhura Starter Franchise